Ukuphucula i-SEO yakho, Funda Ngokuphathelele Ukulungiswa Kwezithombe! - I-Semalt Expert
I-SEO kwiphepha le-OO kunye nokulungiswa komfanekiso ngamanyathelo amabini aphambili ekhankaso lwe-SEO. I-8 (injini) yokukhangela ihlakaniphe kwaye ihlakaniphile kunye nexesha, kwaye inkqubo yokufumana uphando olulungileyo luyinkimbinkimbi. Umxholo womgangatho akwanele njengoko kufuneka uqaphele izinto ezininzi - curso de fotografia en linea. Iinkalo ezahlukeneyo zifaka isandla ekuboniseni i-rankings injini, kunye neyona nto ibalulekileyo yindlela oyenzela ngayo imifanekiso yakho ye-SEO.
Ukuba i-SEO kwiphepha lewebhusayithi yakho, ukulungiswa komfanekiso ibhloko yokwakha. UJason Adler, i- Semalt Umphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi imifanekiso ifumaneke ngokubonakalayo kwiiwebhusayithi zakho kwaye zibhetele ngakumbi kunqaku eliyinkulungwane legama. Kubalulekile ukusebenzisa imifanekiso ngokufanelekileyo ukuze bathumele umyalezo wakho ekuqaleni.
Qinisekisa ukuba imifanekiso oyikhethayo ifanelekile kumxholo wakho wewebhu. Uninzi lweemifanekiso ezingabalulekanga aziyi kukunika i-SEO iziphumo ezinjengomfanekiso owodwa kunye nesicatshulwa esifanelekileyo kunye nencazelo.
Amathegi e-alt adlala indima ebalulekileyo ekusebenzeni kwakho komfanekiso. Zinceda imifanekiso yakho iboniswe kwi iziphumo ze-injini yosesho kwaye uphucule ixesha lakho lokulayisha ixesha. Zonke iinjongo zokukhangela zixhomekeke kwisicatshulwa semifanekiso yakho njengoko zikwazi ukufunda umxholo wakho, ngoko i-alt text and tag tags ziza kuthatha isigqibo sokuba imifanekiso yakho ingaba njani kwimiphumo yesithombe seGoogle..Enye yezona zinto zilungele ukwenziwa kwiithegi ze-altare kukugcina iigaki zifutshane, zichazwe kwaye zifike kwindawo.
Ubungakanani bezithombe kunye nokubamba:
Ubukhulu bomfanekiso bunendima ebalulekileyo ekuphuculeni amava omsebenzisi jikelele. Qinisekisa ukuba imifanekiso oyisebenzisayo ayinzima kakhulu ukunyusa isivinini sakho sokulayisha. Sebenzisa iimifanekiso ezincinane kodwa ezintle ezilula ukubonisa kwiziphumo zeenjini zokukhangela. Sincoma ukuba usebenzise imifanekiso kwi-bytes. Izixhobo ezinjenge-Yahoo Smushit zingasetyenziselwa ukusula ii -tes ezithintekayo ukusuka kwimifanekiso, zenze zibe lula kunaphambili.
Ukubamba imifanekiso ngenye into ebalulekileyo xa kuvela ekuveleni ezinye izithuthi kwi-Google image search. I-Google kunye nezinye iinjongo zokukhangela zinika ukubaluleka ngakumbi kwimifanekiso ebanjwe kwidilesi enye kunemifanekiso ebanjwe kwiinkalo ezininzi. I-algorithm enkulu yokukhangela umfanekiso weGoogle ukuxuba imifanekiso kunye nesicatshulwa kwiwebhusayithi yakho.
Kanye nje ngokuba igama eliphambili libalulekileyo kwi-URL yakho, amafayile afunekayo kwiifoto zakho. Amagama eefayile ezizityebi ezigama elingundoqo ziza kunceda iinjini zokukhangela zihlole indawo yakho ngendlela engcono. Awufanele usebenzise igama lefayile engapheliyo, njengeDSC0119.jpg, njengoko benganiki ulwazi olwaneleyo malunga nemifanekiso yakho. Endaweni yoko, kufuneka usebenzise iifayile ezichazayo kunye namagama akwii-keywords, ezimele zihlukaniswe ngongoma.
Ukudibanisa imifanekiso kunye neetayiti zetekisi:
Umfanekiso yinto ekhangayo kunye neyamehlo echaza indawo yakho kunye nomxholo wayo. Ukuqhagamshela umfanekiso ochanekileyo kufuneka kusebenze i-SEO. Kufuneka ukhuphe ukudibanisa iifoto zakho ngqo. Endaweni yoko, kufuneka ungene kwiimifanekiso uze ufumane izixhumanisi kwiwebhusayithi yakho. Kwakhona, kufuneka usebenzise iithegi eziphathekayo ezifanelekileyo. Ithegi yesicatshulwa inikeza ulwazi malunga nomxholo wakho xa abasebenzisi behlisela isikhombisi sabo phezu kwezikhonkco. Kubalulekile ukongeza i-SEO inkcazo enobungane kunye neenkcukacha eziphambili kwiimpawu zetayitile.